Editor, Author at XYZ NEWS - Page 174 of 218
If you are looking forahot and stunning Asian better half or girlfriend, you should you should think about …
Thoughts On No-Hassle Products In Sugardaddymett
Do you consider that Sugar Infants isareal web-site? If you are not certain regarding it, you might obtain …
What does the term “sugar daddy” mean? And what should you try to find inasugar daddy? Sugar Daddies …
October 11, 2020 By Editor Uncategorized
Finest International Dating Websites – Finding the Right A person
First of all, as it pertains to locating the best international dating websites, http://hardcoreweather.com/user-55422.html there are numerous things that are …
September 27, 2020 By Editor Uncategorized
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရဗ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၁၄ ဦးအထိဖြစ်လာ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရဗ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၁၄ ဦးတွေ့ရှိထားပြီဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံကို မလိုအပ်ပဲ ခရီးမသွားကြဖို့ ထိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ တိုက်တွန်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ထပ်မံတွေ့ရှိသူ နောက်ထပ်လူနာ ၆ ဦးမှာ အမျိုးသမီး ၂ ဦး အမျိုးသား …
January 28, 2020 By Editor NEWS
ကိုရိုနာဗိုင်းရဗ်စ်ကိုကုသနိုင်မည့်ဆေး အဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့အတွက် အချိန်တစ်နှစ်ကျော်ကြာမြင့်နိုင်
တရုတ်နိုင်ငံအတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ် ကူးစက်မှုကြောင့် သေဆုံးသူ ဦးရေဟာ ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိ၁၀၆ ဦးအထိ တိုးသွားပြီလို့ တရုတ်မြို့တော် ပေကျင်းက ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရဗ်စ် ရောဂါပိုးသစ်အတွက် ကုသနိုင်မည့်ဆေးကို အလောတကြီးကြိုးပမ်းနေကြပေမယ့် ကိုရိုနာဗိုင်းရဗ်စ်ကိုကုသနိုင်မည့်ဆေး …
ဘီယာ ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြားတာနဲ့ ဗိုက်ပူပူ ထိပ်ပြောင်ပြောင်တွေကို ပြေးမြင်မိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘီယာမှာလည်း တကယ့်ကို ကောင်းတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိနေပါသေးတယ်။ ဘာတွေလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရအောင် ၁- ဘီယာဟာ ဆံပင်တွေကို သန်မာစေပါတယ် ဘီယာမှာပါဝင်တဲ့ ဗိုက်တာမင် ဘီ နဲက စီလီကွန်ဒြပ်ပေါင်းဟာ …
January 28, 2020 By Editor KNOWLEDGE
ဟွာဝေး 5G ကွန်ရက်နှင့်ပတ်သက်၍ အမျိုးသားလုံခြုံရေး အထိခိုက်မခံဟု ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပြော
ဟွာဝေးရဲ့ 5G networks နဲ့ပတ်သက်လို့ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို အထိခိုက်မခံဘဲ နည်းပညာသစ် အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက် ချသွားမယ်လို့ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်က ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်မှာ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ …
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အရေး ဆောင်ရွက်သည့် ကျန်းမာရေးလုပ်သားများကို ကာကွယ်ရန် WHO တိုက်တွန်း
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံအတွင်း လူ ၁၀၆ ယောက် သေဆုံးပြီး ၄၅၁၅ ယောက် ကူးစက်ခံထားရကြောင်း တရုတ်အစိုးရက ကြေညာထားချိန်မှာ ကျန်းမာရေး လုပ်သားတွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO က ဇန်နဝါရီ …
ထိုင်းတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၆ ဦး ထပ်မံတွေ့ရှိ
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ခံရသူ နောက်ထပ် ၆ ဦးတွေ့ရှိတဲ့အတွက် စုစုပေါင်း ၁၄ ဦးရှိသွားပြီလို့ ထိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်ပြောပါတယ် ။ ထပ်မံတွေ့ရှိသူ နောက်ထပ်လူနာ ၆ ဦးမှာ အမျိုးသမီး …
Page 1 … Page 173 Page 174 Page 175 … Page 218